Qoomiyada Samerka oo dowladda Iswiidhen ku eedeeyey isticmaarsi - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Foto: Jonas Ekströmer/Scanpix/Linus Nygren/Sveriges Radio. Montage: Sveriges Radio.
Qoomiyada Samerka oo dowladda Iswiidhen ku eedeeyey isticmaarsi
La daabacay onsdag 21 augusti 2013 kl 11.04
Wakiilo matalaya dadywoga Samerka ayaa dowladda ku eedeeyey in ay taageerto shirkado dibada laga leeyahey oo ka faa'ideysta dhul-daaqsinka Samerka. Qoraal ay ku daabaceen maanta Wargeyska Dagens Nyhter ayey wakiilada Samerka ku tilmaamen hab-dhaqan dowladda in ay tahay isticmaarsi.
Tusale ugu danbeeyey ayey u soo qaateen shirkad macdanta baarta oo laga leeyahey dalkan Ingriiska oo markii sadexaad macdan baarintaan ka sameyneysa maanta degaan la yiraahdo Kallak oo ku yaala bariga Jokkmokk waqooyiga dalka.
Asbuucii hore ayaa booliska waxuu qabtey lix mudeharaadyaal katiinad iskula xirey kana hor-istaagey halkii ay shirkadan ka baari laheyd macdanta. Bishii juli ayaa sidoo kale la xirey sagaal qof oo ayagana dhigayey mudaharaadyo noocaan ah oo ay kaga soo horjeedeen in macdan baaris laga sameeyo dhul-daaqsinta Samerka. Waxaana la filayaa mudeharaadyo noocaas oo kale ah in ay maanta dhacaan.
Qoomiyada Samerka Iswiidhen ayaa ah qoomiyad laga tiro badan yahay oo ku nool waqooyiga dalka. Waxeyna dhaqdaan xoolo la yiraahdo Renar oo u eg cowsha ku nool Afrika balse ka yaro waaweyn. Dhulka hada layksu heysto ayaa ah dhul-daaqsimeed weligood Samerka xoolaha ku raacan jireen.
Macdan baaaristan la qorsheynayo ayaa labo u kalo qaybineysa dhul-daaqsintooda. Sida ay leeyahiin dadka ku nool toolooyink Samerkana waxaaa qatar galaya dhaqashada xoolahooda la yiraahdo renar iyo dhaqankooda. Laakiin arintaan ayaa kalo qaybisey dadka ku nool Jokkmokk. Sida ay warinayaan warbaahinta degankaas macdan baarista ayaa abuuri karta 400 oo shaqooyin cusub ah dadka deegankas.